यस्तो किन भनिदैन ‘ बलात्कार पुरुषले गरेका हुन्, महिलाले होइन . . . ’ « Pen Nepal
Published On :3October, 2020 8:51 am By : मनिषा पाण्डे
गाउँको सरकारी कन्या स्कूलबाट निस्किएर सहरको ठूलो युनिभर्सिटीमा पढाईको पहिलो वर्ष थियो । आमाको चिन्ता अकैं थियो होला, जुन एक दिनसंगै वजार जाँदा बाटामा कथा सुनाइन । ‘प्रभाकी साथीको विवाह हुन सकेन, मागी विवाह थियो । केटा यही इलाहावादमा प्रतिस्पर्धाको तयारी गर्दै थियो । घरमा कुरा चलेपछि दुवैको भेटघाट वाक्लियो, उनी केटाको कोठामा पनि जान लागिन । अनि सबै थोक भयो उनीहरूबीच । पछि केटाले बिबाह गर्न अस्वीकार गर्यो । भन्यो ‘तिमी बिबाह अघि मसंग सबथोक गर्न सक्छौं भने अरुसंग पनि गर्न सक्छौं ।’ भन त ! के इज्जत रह्यो केटीको ? ’
सोध्न त आमासंग यो चाहन्थे कि, के बिबाहअघि केटाले चाँही सबथोक गरेन ? उसको इज्जत गएन ? तर सोधिन, शान्त भएर कथा सुनें र टाउको हल्लाएँ । आमालाई लाग्यो उनले कथाकारूपमा, जवानीको संघारमा पाइला टेक्दै गरेकी छोरीलाई सेक्स शब्दको उच्चारण नगरी जीवनको पहिलो जरुरी पाठ पढाइन् । पाठ यस्तो कि मात्र केटीको इज्जत उसको शरीरमा हुन्छ । केटाको इज्जतको शरीरसंग कुनै लेनादेना हुदैन । केटा समीको रुख हो, सधैं हरभरा हुन्छ । केटी यस्तो रुखको फूल हो, जुन एउटामा यसो हातले छुने वित्तिकै सबै बर्र् …भूईमा झर्छ ।
भारतकै हाथरसमा १९ वर्षीया महिलामाथि नृशंस बलात्कारपछि पूर्व प्रधानन्यायधीस मार्कण्डेय काटजूले ट्वीटरमा एक पोष्ट लेखे, जसको एक वाक्य यस्तो थियो ‘सेक्स पुरुषको प्राकृतिक आवश्यकता हो ।’ त्यसमा उनले खराव अर्थव्यवस्था, बढ्दो वेरोजगारीका कारण केटाहरूको बिबाह समयमा हुन नसक्दा सेक्सबाट बञ्चित हुन्छन् भन्ने बलात्कारको कारण खुलाए । हुनत उनले आफू बलत्कारको पक्षपाती नभएको सफाइ पनि दिए । तर यो कुराको वकालत अवश्य गरेको देखियो ‘ सेक्स पुरुषको मात्र प्राकृतिक आवश्यकता हो, तर महिलाको होइन ।’
यदी समाजले उसको घर–खान्दान, बुवा–हजुरबुवा र स्वयं केटीको इज्जत उसको शरीरमा भएको देख्दैनथे भने के यति लज्जा, यति अपमान, यति दुःख उसको भागमा पथ्र्यो ? जति अहिले परेको छ । के पुरुषले एकअर्कालाई तल देखाउन, एकअर्काप्रति बदला लिन उनकी घरकी महिलालाई निशाना बनाउँथे ? पाकिस्तानकी मुख्तारन माईृको घटनाले याद दिलाउँछ, दुश्मनी दाजुसंग थियो बदला लिन मुख्तारन माईको चारजनाले सामूहिक बलात्कार गरे र १० जना तमासे बने । इज्जत केटाको लिनु थियो, तर केटाको इज्जत त उसकी बहिनीको शरीरमा राखिएको थियो । जहाँ राखिएको थियो, त्यहाँबाट लुटे ।
यो भनिरहँदा म थाकेको महसुश गर्दैछु, किनभने यो पहिलो पटक नयाँ कुरा भनिरहेकी छैन । योभन्दा अघि हजारौं पटक भनिसकिएको छ । तर, संसार बदलिएको छैन, पुरुषवाद जाँदैन, इज्जत जोगिएको छैन, दुःख घटिरहेको छैन । मसंग यस्तो कुनै घटना भएको छैन, तर आफ्नो शरीरमा राखेको इज्जत म उमेरभरी बचाँउदै आएको छु । हरेक समय सावधान, आफ्नो शरीर सम्हाल्दै, ढाक्दै, लुकाउँदै, खराव नजरबाट जोगाउँदै ।
अमेरिकी लेखक तथा फिल्म निर्माता जेक्सन कार्टजले एउटा टक शो मा भनेका थिए – हामी यो भन्छौं गत वर्ष कतिजना महिलामाथि बलात्कार भयो, यो भन्दैनौ कि गत वर्ष कति पुरुषले महिलामाथि बलात्कार गरे ? हामी जानकारी दिन्छौं – गत वर्ष कति छात्रामाथि यौन दुब्र्यवहार भए, हामी यो भन्दैनौं कि गत वर्ष कतिजना केटाले विद्यालयका छात्रामाथि यौन दुब्र्यवहार गरे ?
तपाई हैर्दै हुनुहोला, यो भाषामा कहाँ गाह्रो छ ? त्यही गाह्रो, जुन हाम्रो समाज, हाम्रो घर, हाम्रो सोचमा छ । गल्ती कुनै एउटाले गर्छ दोष अर्कालाई लगाइन्छ । जिम्मेवारी एउटाको हुन्छ, अर्काको थाप्लोमा हालिन्छ ।
भारतीय सम्वन्धित निकायले कर्तब्य पुरा गरुन र महिलाविरुद्ध हुने हिंसा तथा बलात्कारको तथ्यांक यसरी पेश गरुन – ‘गत वर्ष ४३ हजार ८७७ पुरुषले महिलामाथि बलात्कार गरे । यी मध्ये ३३ हजार पीडितका दाजुभाई, मामा, काका, फुपाजु, सानाबुवा थिए । गत वर्ष ९७२ केटीहरू माथि एसिड फालियो । ४२ हजार केटाहरूले केटीहरूमाथि दुब्र्यवहार गरे । १८ हजार केटाले आफ्ना गलफ्रेन्डको पोर्न भिडियो बनाए । १४ हजार पुरुषले आफ्नी पत्नी तथा प्रेमिकाको हत्या गरे ।’
एउटा सानो घुमाइले पुरै कुरा बदलिन्छ, त्यसको अर्थ बदलिन्छ, उसको जिम्मेवारी बदलिन्छ । कुरा त्यही हो, मात्र भन्ने तरिकाले तय हुन्छ कि कसले अपराध गरेको हो, को दोषी हो वा जोसंग अन्याय भयो त्यही ? इज्जत बलात्कार गर्ने केटा मान्छेको जानु पर्ने हो की, त्यसको शिकार भएकी केटी को ? हामीले आफ्नो छोरीलाई बलात्कारबाट कसरी बच्ने भन्ने सिकाउने हो की, छोरालाई बलत्कार नगर भन्ने ?
हामीले आफ्ना छोरीलाई गर्भवती नहुन र छोरालाई कसैलाई गर्भवती बनाएर जिम्मेवारीबाट नभाग्न सिकाउनु पर्ने हो । छोरीलाई सिकाउनु पर्ने हो पूरुषसंग डराएर बस्नु, छोरालाई सिकाउनु पर्ने हो महिलालाई तल्लो दर्जाको कहिल्यै नसोच्नु ।
हुनु त यस्तो सामान्य ज्ञान हुनु पथ्र्यो कि, जसरी पृथ्वी गोलो छ, समुद्रमा पानी छ, त्यसरीनै जसरी पुरुष मान्छे हो त्यसरीनै महिला पनि मान्छे हो । कुनै पनि मानिसको इज्जत उसको शरीरमा हुँदैन । प्रेम,करुणा, इमानदारी र दायित्वबोधको मात्रा हो इज्जत तथा बेइज्जत मापन गर्ने अनि यो मात्रा दुबैमा बराबर लागु हुन्छ । जबसम्म यो आधारभूत कुरा सम्झिदैनौं तबसम्म न कानुनको भरोसाले बलात्कारको संस्कृति बदल्न सक्छौं, न महिलाका लागि राम्रो समाज निर्माण गर्न सक्छौं ।
उपत्यकामा थपिए ३२६ संक्रमित अन्य जिल्लाका कति ? (तालिकामा हेर्नुहोस् जिल्लागत विवरण)
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा सोमबार ३२६ जनामा कोरोनाभाइरस संक्तमण पुष्टि भएको छ। बुधबारको नियमित प्रेस
कोरोनाको कहर : भ्रम र यथार्थ
गत बर्षको डिसेम्बर महिनादेखि चीनको हुवाइ प्रान्तबाट विश्वव्यापी महामारीकोरूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस ९कोभिड–१९०ले यति वेला